Wararka - 2020, Qiimaha suuqa birta Shiinaha ayaa marka hore hoos u dhici doona ka dibna kor u kici doonaa, iyadoo isbeddello weyni socdaan oo sare u kacayaan
Marka la gaaro sannadka 2020, sicirka suuqa birta Shiinaha ayaa marka hore hoos u dhici doona ka dibna kor u kici doona, iyadoo isbeddello weyni socdaan oo kor u kacayaan. Marka la gaaro Nofeembar 10, 2020, isugeynta qiimaha birta qaran waxay noqon doontaa 155.5 dhibcood, koror 7.08% ah isla muddadaas sanadkii la soo dhaafay. Xarunta culeyska culeyska ayaa kacday.
Baahida macaamiisha ayaa noqon doonta mid xoog badan. Tan iyo bilowgii sanadkan, dhaqaalaha guud ee waddanka ayaa si joogto ah u soo kabsaday, heerka kobaca dhaqaalaha wuxuu muujiyey dib-u-habeyn qaabaysan oo V ah, maalgashiga xasiloonina wuxuu noqdey diiradda hagaajinta ka-hor-wareegyada. Waxaa lagu qiyaasay in baahida loo qabo birta ceyriin (oo ay kujirto dhoofinta birta tooska ah) ay u Boodo doonto ilaa heerka 1 bilyan tan, iyadoo laga warqabayo boodbood cusub oo taariikhda ah.
Qiimaha dhalaalida alaabada ceeriin ayaa si aad ah kor ugu kacay. Tan iyo bilowgii sanadkaan, sababo kala duwan awgood, qiimaha alaabada ceeriin ee sameysa birta sida macdanta birta iyo coke ayaa si aad ah kor ugu kacay guud ahaan dalka, iyagoo sare u qaaday qiimaha wax soo saarka birta iyo sameynta taageero qiimo leh.
Hoos u dhaca ku yimid sarifka lacagta dollarka Mareykanka. Sanadka 2020, qiimaha birta qaranku wuu isbedbeddelayaa, hoos u dhaca ku yimid doolarka Mareykanka sidoo kale waa qodob muhiim ah. Hoos u dhaca ku yimid doolarka Mareykanka ayaa kordhin doonta qiimaha la soo dajiyo ee dhoofinta dhoofinta ceyriinka iyo wax soo saarka birta, wuxuuna kordhin doonaa qiimaha biraha gudaha.
Sanadka 2020, qiimaha birta Shiinaha ayaa isbedbeddeli doona oo kor u kici doona, ugu horreyntii, baahida macaamiisha ayaa noqon doonta mid xoog badan. Tan iyo sannadkan, dhaq-dhaqaaqa guud ee qaranku si isdaba-joog ah ayuu u soo kabtay, heerka kobaca dhaqaalaha wuxuu isu beddelay dib-u-celin qaabeysan oo V ah, maalgashiga xasilloonina wuxuu noqday diiradda ka-hortagga hagaajinta meertada. Natiijo ahaan, xoojinta isticmaalka birta Shiinaha ayaa sii kordheysa halkii laga yareyn lahaa sannadka 2020. Gaar ahaan ka dib markii la galay qeybtii labaad ee sanadka, dalabka birta ee qaranku wuu sii xoogeysan doonaa Sida laga soo xigtay tirakoobyada, laga bilaabo Jannaayo ilaa Sebtember ee sannadkan, isticmaalka muuqda ee Shiinaha ee cayriin birta waxay ahayd 754.94 milyan oo tan, koror sanad-sannadeed ah 7.2%. Kuwaas waxaa ka mid ah, heerka kobaca ee bishii Luulyo wuxuu ahaa 16.8%, bishii Ogos wuxuu ahaa 13.4%, iyo bishii Sebtember wuxuu ahaa 15.8%, taasoo muujineysa koboc xoog leh oo koritaan ah Biraha birta (oo ay ku jiraan dhoofinta birta tooska ah) wuxuu u boodayaa 1 bilyan oo tan, kor u kac cusub taariikhda